Article submitted by: Thunderbolts on 8-Jun-2013
ဒို.တိုင်း ၊ ဒို.ပြည်၊ ဒို.လူမျိုးဆိုတာ ဘာတွေလဲ သိရဲ.လာ- သိပြီလား?
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၊ အချုပ်အချာအာဏာပိုင် လွတ်လပ်သည်. နိုင်ငံဖြစ်
သည် လို. ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေက ဆိုထားတယ် ။ ဘယ်လိုအချုပ်အခြာအာဏာတွေ ပိုင်ပြီး ၊ ဘယ်လိုလွတ်လပ်သောနိုင်ငံဖြစ်
တယ်ဆိုတာ ညီး ဘယ်လို နားလည်သဘောပေါက်သလဲ ?
ဘယ်လိုပြောစေခြင်သလဲ သူငယ်မ - ရိုင်းရိုင်းပြောရ မလားယဉ်ယဉ်ပြော
ရမလား ? ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ညီးပြောတာတွေဟာ ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက်တယ် ဆိုတာနဲံ.နိုင်းခြင်တယ် ။ ယဉ်ယဉ်ပြောတော့- အသံ
ကောင်းဟစ် နေတယ်လို.ဆိုရမလား၊ ငါ့လုံမလေး စကားပြောလိမ်မာလှချည်ရဲ့ လိုဘဲ ပြောရမလား ဘဲ ။ ဘယ်လိုပြောပြော ညီးက တော့ ‘ကျမ မိကောင်းဖခင် သမီးပါရှင်’ လို.ပြောမှာပေါ.နော် ။ ဟုတ်ရဲ.လား ။
မိကောင်းဖခင်သမီးဆိုတာ ဘယ်လို မိန်းခလေးမျိုးကို ပြောတာလဲ ဟင် လို. မေးပါရစေ? ပြောတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ကောင်းတာ မကောင်းတာ ဟာပါးစပ်
က ပြောယုံနဲ့ မပြီးဘူး ၊ အလုပ်နဲ့ လုပ်ပြရတယ် ။
ဒီလိုကြားရတော့ ညီးကို လိုလားထောက်ခံသူတွေက ‘ပြီးတာတွေပြီးပါစေ'
တော’့လို. ဆိုကြပြန်တယ် ။ ညီးက အင်္ဂလိပ် မယားဖြစ်ဘူးပြီး အင်္ဂလိပ်လို
ပြောရမှ အာသွက်သျှာသွက် ရှိတယ်ဆိုတော့ Let by gong be by goneလို.သူတို.ကလဲ ပြောကြတယ်လေ။ မြန်မာလိုတော့ ပြီးတာတွေ ပြီးပါစေတော့လို.ဆိုမလားပေါ့နော်၊ လွယ်လိုက်တာ။ အင်္ဂလိပ် မယား လို. မခေါ်စေခြင်ရင် ၊ ‘ လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဘက် ’ လို.ပြောရင်ရော ပိုကြိုက်မလား?
ပြီးတာတွေ ဆိုတာက ဘာတွေလဲ ၊ ဘာတွေ ကို By Gone ရမှာလဲ ပြီးရမှာလဲ အေရဲ. ။ ညီးနဲ့ညီးကိုထောက်ခံသူတွေ က ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင် လုပ်၊ တိုင်းပြည် ပျက်လုခမန်း လုပ်ကြတာကို အလုပ်မခံ တဲ့ မျိုးချစ် တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် တွေနဲ့ တပ်မတော်ကို အတိုက်အခံကိုမှ ထောက်ခံတဲ့ အနောက်အုပ်စု ၀င်တွေအားကိုးနဲ့ ညီးတို. ရုတ်ချင်တိုင်ရုတ် မာချင်တိုင်းမာခဲ့ တယ် ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၃ နှစ်လုံးလုံး စီးပွာရေး ပိတ်ဆို.ခဲ့တယ် ။ ပိတ်ဆို.ဘို.အားပေးထောက်ခံ ခဲ့တယ် ၊ ပိတ်ဆို.တာကို ၀မ်းသာ အားရကျေနပ် နေခဲ့ကြတယ်လေ။
ပညာရှိ တဦးရဲ့ စကားကို ညွှန်းရရင် ၊ မြန်မာတွေဟာ With coarse rice to eat, with water to drink, and their bent arm forapillow -- they have still joy in the midst of all these things.’ ဒါတွေကို ညီး ဖျက်ဆီးပြီး လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေ ကြီးမားအောင် လုပ်တယ်၊ ဂေါတမ တရားတွေကို ညီး အန်တုတာ၊ ပျက်လိုပျက်ဆီး ဖြစ်အောင် လုပ်တာဘဲ လို. ညီးကို မိစ္ဆာဒိတ္ထိ အဖြစ် ဒို.ကတော့ စွပ်စွဲမယ် ။
အမျိုးမျိုး စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး၊ ကြမ်းပိုးဟာ လိပ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိခဲ့ တဲ.အနောက် အုတ်စုဟာ ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုလိုနီ ခေတ်ဟောင်းနည်းတွေနဲ့ လုပ်လိုတော့ မရတောဘူး သူတိုသာ ရှုံးတော့မှာပါလား ဆိုတာသိလာတဲ့ အတွက်. မြွေမသေ ဒုတ်မကျိုး ဖြစ်အောင်၊ အားလုံး အရှက်ပြေအောင် အဆင်ပြေ အောင် ကာယကံရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး လမ်းပြောင်း လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ညီးဟာ အရှက်မရှိတိုင်း တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး တို.ကို ကာကွယ်နေတဲ့ မြန်မာ.တပ်မတော်ကို သိက္ခာကျအောင်တင်မက မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပါ သိက္ခာမရှိ
အောင် ဂုဏ်မဲ့အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ညီးဟာ လင်စိတ်မွှန် ၊ သားစိတ်မွှန်၊ အာဏာ
စိတ်မွှန်နေခဲ့တဲ့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ မပိုင်တဲ့ ဏ္ဍုတ္ထိယ တယောက် ၊ လင်သေ သားစွန်ချီ ၊ ရေနစ် ဖြစ်ရတဲ့ မပဋါ လိုမြေလူးပြီးစိတ်မနိုင် ချောက်ခြား
နေတဲ့မိန်းမ ၊ လူကြီးတွေကိုမရိုသေ၊ အရွယ်တူသူ ကိုတောင် မလေးစား ။ လူမျိုးကိုတောင် မညှာတာဘဲ အာဏာရူး နေသူ ၊ ကိုယ်ဘာလုပ် မိလိုလုပ်မိမှန်း
မသိအောင်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမငယ် တယောက် ဘဲ လို.၊ နားလည်ဘို. ဒိုတတွေ
အားလုံး ကြိုးစားနေ ကြချိန်မှာ ညီးဟာ ပါးစပ် ဟတိုင်းဟတိုင်း လူသံမပါဘဲ တ၀ုတ် ၀ုတ် ၊ အဂိန်ဂိန်နဲ့ ခွေးဟောင်သံ ပေါက်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သတိထားမိရဲ.လား ?
ဒီနေရာမှာ သူအကျိုး ဆိုတာကို ထည့်မပြော။ ကိုယ့်အကျိုး သူ.အကျိုးဆိုတာကို
နားလည်တဲ့အစိုးရ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုး အကျိုးအတွက်ကို ငဲ့ကွက်ခဲ့တဲ
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ အဆက်ဆက် ၊ ဘယ်သူကိုမှ ဘယ်တုန်းကမှ ရန်သူ မမှတ် ၊ ရန်မလုပ် ခဲ့ တဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရဟာ ၊ ညီးကြောင့် ချောင်ပိတ်အကန်ခံရတာ
တွေ လူမျိုးနဲ့တိုင်းပြည် နစ်နာ ရတာတွေကို တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး အကျိုးအတွက်
ညီးကို ခွင့်လွှတ်ကောင်း လွှတ်ခဲ့ပေလိမ့်မယ် ။ မေ့ပစ်ဘို.ဆိုတာ တော့ မလွယ်ပါ
ဘူး၊ လွယ်လွယ်နဲ.မေ့ကောင်းစရာတွေ တဲ့ လား ? သူတိုမေ့တိုင်း မေ့လိမ်မယ် မဟုတ်တဲ့ တခြားသူ တွေ ရှိနေတယ်၊ ခရစ်ယန်ဘာသာမှာလို.၀န်ခံလိုက်လို. Everything is forgiven ဆိုရင်တော့လဲ တမျိုးဘဲ ပေါ့ ။
ဗုဓ္ဒဘာသာမှာကတော့ ၊ ‘၀ဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာ ခဏ’ လို. စကား ဆိုရိုးရှိတယ် လုံမရဲ့၊ ၀ါတွင်းမှာ တရားလေးဘာလေး ထိုင်ပြီး မှတ်လိုက်အုံးလေ။ သာဓု ခေါ်ရအောင်။